Yurie | Nov 22, 2018 | Dharirai Yurie BSF Kushanda pa Playsrore
Yurie BSF yechirongwa chirongwa chinogadzirwa nemaune, kubatsira kubatsira kushandura BSF fly kubva pamagwaro uye mavhidhiyo zvidzidzo kusvika pakugadzirwa kubudirira maitiro Maggot mombe/ Mishmar odorless.
Yurie BSF mukugadzira mapurojekiti anoshandisa zvikuru sophisticated program language provisions. Zvekare LIVE Chat musati mava kuenda kana kuti mubve maitiro. Saka kana pane mibvunzo iwe unogona kukurumidza kuratidza.
Kunze kwekuve wakanyatsogadzirwa, faira rayo iri duku uye iri nyore, iro 17 MB. Nokudaro hazvizokwanisi kuwandisa foni yemuteresi.
Chimwe chinhu chinonzi Yurie BSF chinyorwa chinotungamirirwa neS step-by-step SOP kuita kuti zvive nyore kuvashandisi kushandisa zvese zvechidzidzo muchigadziro.
Uye iyo inobatsira ndeyokuti mune iyi shanduro inokwanisa kukwanirana nemumwe mushandisi nemumwe musarudzo. Saka zvakakosha zvikuru kuvashandisi veYuroe BSF. Download the Yurie BSF Application
Ndeupi Chikamu chiri Yurie BSF Application?
Kune marudzi akawanda emapoka kubva kubasa riri mu playstore. Zvino iyo Yurie BSF yekushandiswa inosanganiswa mune chikamu chei?
Yakabatanidzwa mune izvi ndeyekuvandudza kushanda nekushanda kwe smartphone smartphone. Mienzaniso: 360 Security, Clean Master, Google Translate, Greenify, Audio Recorder, nezvimwewo.
Maitiro ekushandiswa kwevanhu vanoita zvekugarisa anoita kuti vashandisi vabatane nevamwe vanhu vakawanda. Muenzaniso: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, nezvimwe.
Kupa zvivako zvevashandi kuti vashandise kuburikidza nekutaura kana inzwi. Muenzaniso: BBM, WhatsApp Messenger, LINE, Facebook Messenger, WeChat, KakaoTalk, nezvimwe.
Ichi chikwata chekushandiswa chinowanzoshandiswa pakushandisa mifananidzo. Mienzaniso: Camera360, PicsArt, B612, Magisto, MomentCam, uye Adobe Photoshop, nezvimwewo.
Applications News uye Magazines Chikumbiro inoshandiswa nhau kana magazini inogona kuverengwa zvakananga pane HP Example: BaBe, Kurio, Detik, VivaNews, Kompas, nezvimwe.
Kuvaraidza Chikumbiro ndezvezvivaraidzo zvakawanda. Mienzaniso: mimhanzi, mitambo, TV, kutamba mavhidhiyo.
Yurose BSF yekushanda inowanikwa mune izvi, kureva chirongwa chekudzidzisa. Nenzira yakawanda kushandiswa kwechikwata ichi chinangwa chekubatsira mune zvedzidzo. Mienzaniso: Mitambo Yevana Yekudzidzisa, Smart Kids, Smart Mathematics, Duolingo: Kudzidzira Mutauro Wemusununguko, nezvimwewo.
Nokuti Yurie BSF svondo ndiyo dzidzo pachayo iyi yekushanda isad-free kuitira kuti vashandi vanzwe vakasununguka kudzidza vasingatongonetseki nezviziviso.
Zvitsva zvinowanzopiwa zvinangwa zvinowana kuwana mari inobhadharwa nevashambadziri. Izvi zvinoreva kuti rusununguko rusununguko Yurie BSF haruna kuwana chero mari kubva kumunhu.
Izvi zvakachena Yurie BSF inoda kugovera 100%.
Chii chinowanikwa mu Yurie BSF Application?
Iko kune zvakawanda zvinowanikwa mubasa iri, iro
Mazuva ano BSF Kushandira Pasina SMELL
HERE FREE 100% purasi
Ndarama Inowanikwa Pachipu
Yurie BSF ndiyo imwe chete iyo inoshandiswa kupayona maggot BSF Mazuva ano asinganzwisisiki munyika.
Iko kushandiswa kwemagetsi asingagone kushandisa tsvina, marara, mombe yemombe. Kuita maggots odorless haacherecheri kuvuta, haashandisi zvinodhaka uye haadi mishini.
Saka iyo maggot inogadzirwa iri nyore uye haina kutengesa, yakapoteredza Rp XUMX-Rp X XX pa kg
Iyi chipo kune shamwari inodzingwa kune shamwari dzinonzi Yurie BSF dzinoshingaira kutengesa maggot avo kuna Yurie BSF.
Chinangwa chekubatsira uku ndeyevanasikana vaJurie BSF kuti vawedzere kuwedzera kwekugadzirwa kwemagetsi avo uye jul kuna Yurie
Muzviitiko zvakasiyana-siyana zvidzidzo zvevhidhiyo mumutambo wekugadzira maggot pasina kunhuhwa kwakapiwa. Iwe unongotarisa uye unozviita maererano nemirayiridzo muvhidhiyo.
Vhidhiyo mavhidhiyo munharaunda iyi haisi kugoverwa pamagariro evanhu uye youtube. Nokuti iyi vhidhiyo uye rugwaro rwakapiwa zvakananga shamwari dzaJurie.
Kudzidza kukudziridza pasina 100% maggot, iyi purogiramu inonyanya kune avo vasingakwanisi kutenga mubhadharo. Terms and conditions please contact Chika Chika on 0812-2105-2808.
Nei iri Yurie BSF Chikukosha?
Nokuti iyi shanduro inoshandisa mudziyo muitiro wekurima maggot pasina kunhuwa
Usati waita, iwe unogona kudzidza kuburikidza nekuona mavhidhiyo edzidzo mune zvekushandisa. Saka kana uchienda papurazi pane tsanangudzo yekutanga.
Mushure mokunge tadzidzira, pane kazhinji zvinhu zviduku zvatinokanganwa, kana kungoda kuzviita pachedu patinenge tichiita pamba, zvino iwe unofanira kungotorazve iyi video tutorial.
Mazuva ano zvinyorwa zvese zviri mairi mavhidhiyo nemagwaro anokosha anovandudzwa kuburikidza neshoko iri, saka chero kupi kwaunenge uine kuwana zvinyorwa zvitsva uye zvigadziriswa pamusoro pekugadzira maggot pasina kunhuwa.
Zvose zvevatangi vekare uye vakwegura zvechokwadi zvinoda maggot ezvekuvandudzwa kwebhizimisi rezvemabhizimisi uye ruzivo runotumirwa kuburikidza neshoko iri.
Ko Yurie BSF Kushanda Inobatsira Sei Kubudirira kweMaggot Animals?
Mukuita kune chikonzero chekutungamira kwakananga uye kusina kutarisana. Uye zvikamu pakuzviita.
Mhidhiyo yevhidhiyo mubasa iri yakarongedzwa nenzira yakadai yekuve nhanho nehanho kutevedzana uye kune SOP (standard operation procedure). Nokudaro kune kuwirirana kwemaitiro emabasa uye zvechokwadi zvinowanikwawo zvinotarisirwa kuva nehutano (kwete chirema)
Shamwari dzaJurie kwose kwose kuburikidza nekutevera mirayiridzo iri muchikumbiro inotarisirwa kusvika kune kukohwa chinangwa chemazana emagetsi emagetsi mumwedzi isingapfuuri ne1,5.
Uye nzira yekuita izvi ndeyokutevera mavhidhiyo edzidzo. Saka shanduro iyi yakakosha zvikuru uye inodiwa zvikuru kuti ibudirire zvinangwa zvekugadzira maggot nemigumisiro yakawanda uye isina kunaka.
Makomborero uye Mashandisiro eYuroe BSF Applications
Haana kusimbiswa nokuti matanho emabasa akajeka
Nguva dzose inovandudzwa
Kune nzira dzakarongeka dzekudzikisa kukanganisa nekusiya.
Zuva rekugadzira maggot rinowedzera kuvimba uye kuzvimirira
Zvimwe zvakarongeka pakuita maggothi ekugadzirwa.
Created performance standards nemhinduro dzekrete
Iva nekuongorora zvishandiso kugadzirisa michina
Iva nemutungamiri kuti uongorore basa rakaitwa.
Kuumba rudzi rwakachengeteka uye rwakanaka kuti usakurise kuita maggot.
Zvimwe zvakarongeka uye zvinobudirira.
Inotungamirirwa mukuita mashizha ezuva rimwe nerimwe.
Dzivisa basa rinoputika.
Kana pane mhosho, zviri nyore kutarisa nekuongorora
Basa rekushanda rinonyatsovimbiswa uye rinokwanisa kumhanya zvakanaka mumamiriro ezvinhu.
Dzidzo inotungamira mubasa iri chigadzirwa uye motokari inobudirira inokura maggot pasina kunhuwa.
Iri shanduro inonyanya kukosha pakubudirira kwekukohwa mazana emakirini mumaduku anodarika 1,5.
Kutevedzera mirayiridzo mubasa rinoita kuti iwe ubudirire mukugadzirwa kwemagetsi akawanda, kushandiswa kusingaperi, pasina kushungurudzika, kuchengeteka, kunyatsogadzikana, uye kuwedzerwa kuvimba kunogona kukwanisa kukura maggot kwenguva refu.
99 Nzvimbo yeMaggot pasina Bau Ranch
Zvine Kuongorora kweMaggot Kukura Kwakawanda
Kutengesa uye Kutenga uye Kutengesa Maggot
Kugadzira Maggot FAQ